Dusan Vlahovic wuxuu u furan yahay Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Dusan Vlahovic wuxuu u furan yahay Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur
Dusan Vlahovic wuxuu u furan yahay Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur
Weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic ayaa lagu soo waramayaa inuu u furan yahay inuu u wareego Premier League xilli ay xiiseynayaan kooxo badan oo Yurub ah oo ay ku jiraan Manchester United , Manchester City iyo Tottenham Hotspur .
21-sano jirkaan ayaa iska dhigay mid ka mid ah weeraryahanada loogu doonista badan yahay, isagoo dhaliyay 16 gool 20 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan, isagoo seddex mar ka badan ciyaaryahan kasta oo ka ciyaara horyaalka Talyaaniga.
Vlahovic, oo ay La Viola ku qiimayso 75 milyan ginni, ayaa lala xiriirinayay labada kooxood ee Manchester iyo Spurs bilihii u dambeeyay iyo sidoo kale kooxaha sida Arsenal , Chelsea , Real Madrid iyo Paris Saint-Germain .
Sida laga soo xigtay saxafiga Gianluca Di Marzio kooxaha Premier League ayaa loo gacan galiyay baacsiga ay ku doonayaan xiddiga heerka caalami ee dalka Serbia, isagoo doorbidaya inuu u dhaqaaqo England haddii uu go’aansado inuu ka tago Fiorentina.
Di Marzio ayaa sidoo kale sheegay in u dhaqaaqista kooxda Arsenal ee Vlahovic ay tahay mid aan suurtogal ahayn maadaama uu weeraryahanku xiiso weyn u qabo inuu ku biiro midkood Man United, Man City ama Spurs.
Chelsea oo soo bandhigtay xiisaha ay u qabto xiddiga Bayern Munich...
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso xaalada qandaraaska Serge Gnabry ee Bayern Munich , iyadoo Blues ay xiiseyneyso saxiixa xiddiga heerka...
AXMED BIIF OO SOO BANDHIGAY BARNAAMIJ AAD LOOGU BAAHNAA
Chelsea oo wadahadalo heshiis kordhin ah la bilowday N’Golo Kante.
Wasiir xukuumada R/W Rooble ka tirsan oo loo doortay xildhibaan cusub
Deg Deg Jiis Mareexaan oo ka baxsan Rabay Muqdisho oo Gacanta...
RW Rooble oo ku dhawaaqay in la xirayo jidadka Muqdisho
Deg Deg Fahad Yaasiin oo u gafay Axmed madoobe,...
“POLICE KA JARMALKA OO SOOMAALIDA U DIGAY”” & CABSI WAYN
Arsenal 2-1 Leeds United: Nketiah oo laba gool u dhaliyay Arsenal